एक भ्यागुताको मुल्य २ लाख ३२ हजार, कारण यस्तो रहेछ पत्ता लाग्दा दुनियाँ चकित !!! – Waikhari
गृहपृष्ठ खबर एक भ्यागुताको मुल्य २ लाख ३२ हजार, कारण यस्तो रहेछ पत्ता लाग्दा दुनियाँ चकित !!!
एक भ्यागुताको मुल्य २ लाख ३२ हजार, कारण यस्तो रहेछ पत्ता लाग्दा दुनियाँ चकित !!!
संसारको सबैभन्दा विषालु भ्यागुता विश्वभरि तस्करी गरिन्छ । ती भ्यागुता यति विषालु हुन्छ की यसले १० जना मानिसलाई सिध्याउन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कालो बजारमा यस प्रजातिको भ्यागुताको मूल्य २ लाख ३२ हजार रूपैयाँ भन्दा धेरै रहेको छ । जुन तपाई हामीलाई पत्याउन सहजै गाह्रो हुन्छ ।
ती भ्यागुताको यस प्रजातिको नाम पोइजन डार्ट फ्रुग हो । यो लोपोन्मुख प्रजातिको भ्यागुता हो । सामान्यतया यी भ्यागुताहरू पहेंलो र कालो रंगका हुन्छन्। केहि हरियो–उज्यालो सुन्तला र केहि नीलो कालो हुन्छन् ।
यस भ्यागुताको विषको कारणले, यो विश्वभर तस्करी गरिन्छ । सामान्यतया यी भ्यागुताहरू १.५ सेन्टीमिटर लामो हुन्छ तर केहि ६ सेन्टीमिटरसम्म लामो हुन्छन् । औसत तौल २८ देखि ३० ग्राम हुन्छ । तर तिनीहरू भित्र एक त्यस्तो वि’ष हु’न्छ जसले १० जना मानिस सिध्याउन सक्छ ।
यो बोलिभिया, कोस्टा रिका, ब्राजिल, कोलम्बिया, इक्वेडर, भेनेजुएला, सूरीनाम, फ्रेन्च गुयाना, पेरू, पनामा, गुयाना, निकारागुआ र हवाईको उष्णकटिबंधीय जंगलमा पाइन्छ । हालै ४२४ साना भ्यागुताहरू बोगोटाको अल डोराडो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुको झोलाबाट फेला पारिएको थियो ।